सन्दर्भमा किशुनजी, कांग्रेस र पदक - Sajhamanch
२०७८, कार्तिक ११ गते बिहानिको ११:२४:३६ बजे Thursday 28th October 2021
September 25, 2021 7:48 am किशोर नेपाल
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देशका गन्यमान्य महिला तथा सज्जनवृन्दलाई प्रदान गरेका तक्मा र पदक विवादको बबन्डरमा परेका छन् । सरकारले पदकको राजनीतिकरण गरेकोमा कुनै शंका छैन । यति गर्दागर्दै पनि गणतान्त्रिक सरकारले पहिलोपल्ट लोकतन्त्रका अथक अभियन्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त ‘नेपाल तारा’को सम्मान दिएर उहाँप्रति कृतज्ञ भाव प्रकट गरेको छ । पक्कै पनि उहाँ नेपाल तारा हुनुहुन्थ्यो । यसमा कुनै शंका छैन । उहाँलाई जनताले दिएको सम्मान थियोः सन्त नेता । कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवित रहनुभएको भए उहाँले सरकारी सम्मान स्वीकार गर्नुहुने थिएन । किनभने, देशको सेवा गरेबापत छातीमा तक्मा ढल्काएर हिँड्ने प्रवृत्ति थिएन उहाँमा । एउटा सानो बक्सा र सुराही जसको जीवनको प्रतीक बनेको छ, उसका लागि देखावटी सम्मानको महिमा नै के भयो र ?
देशका केही गणतन्त्रवादीहरू किशुनजीको नाम सुनेर नजानिँदो ढंगले निधार खुम्च्याउँछन् । दोस्रो जन–आन्दोलनमा उहाँको सहभागिता नरहेको संकेत र इसारा धेरै देखिन्छ । तर, किशुनजी गणतन्त्रविरोधी हुनुहुन्नथ्यो । उहाँको भनाई यति मात्रै थियो कि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रबाट विधिवत् संवैधानिक राजतन्त्रलाई विदाबारी गरेको छैन । स्थापना कालदेखिको यो प्रावधानलाई महाधिवेशनमार्फत संशोधन नगरेसम्म पार्टीमा गणतन्त्रको वैधानिकता स्थापित हुन सक्दैन । दोस्रो, उहाँले सक्रिय राजनीति त्याग्नुभएको थियो । सत्ताको ‘मोह’ पनि उहाँको घाँटीसम्म आइसकेको थियो । जुन प्रकारले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाइयो, त्यो उहाँको असम्मान थियो । त्यो असम्मानविरुद्ध संसदमा आफूलाई किशुनजीका हितैसी र पक्षधर भन्ने कसैले एक शब्द बोलेन । यस प्रसंगमा पार्टीले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्नुपर्ने पनि थिएन । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँसँग वार्ता गरेको भए किशुनजीका लागि कुर्सी कुनै ठूलो थिएन । आफ्ना विरुद्ध वातावरण धमिलो देखिने बित्तिकै किशुनजीले प्रधानमन्त्रीको पद छाडिदिनुभयो । त्यसपछिको उहाँको समय राजनीतिबाट अलग रह्यो ।
किशुनजीमा कहिले पनि राजतन्त्रप्रति कुनै आकर्षण रहेन । उहाँले ७ फागुन २०१९ मा आफ्नो डायरीमा लेख्नुभएको छः नेपालका अहिलेका शासकमा न बुद्धि छ, न शक्ति । यिनीहरू कल्पनाशील पनि छैनन् र यिनीहरूको चरित्र पनि छैन । यिनीहरू लोभ र अहंकारको पकडमा जकडिएका छन् । यस्ता मानिसको समूह अरू जे भए पनि देशभक्त हुन सक्दैन । किशुनजीले आफू सत्तामा रहँदा माओवादी जनयुद्ध समाप्तिका लागि सक्दो प्रयास नगर्नुभएको होइन । तर, उहाँलाई पार्टी र राजाले साथ दिएनन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले फ्रान्सको भ्रमण गर्न चाहनुभएको थियो । फ्रान्सबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने उहाँको इच्छा थियो । तर, उहाँको यो इच्छा पूरा भएन ।
सन्दर्भमा किशुनजीको चर्चापछि, पदकबारे अहिले उठेका विवादको समीक्षा गर्नैपर्छ । गणतान्त्रिक सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देशका भद्र–भलादमी, नेता र कर्मचारीवर्गलाई मान, पदवी, पदक र विभूषण वितरणको चलन चलाएपछि पदक पाउनेहरू कोको हुन् ? कोको हुनुपर्छ ? यसमा विचार पुर्‍याउनैपर्ने हो । तर, यता कसैले विचार पुर्‍याउन खोजेको देखिएन । पदकहरूको गाईजात्रा भयो । उसो त हिजो देशमा राजतन्त्र रहँदा पनि पदकहरूको ‘गाईजात्रा’ नै हुन्थ्यो । त्यो समयमा पदक धेरै बाँडिन्थ्यो । शासन सत्ताको चाकडीमा लागेका मानिस धेरै थिए । तक्मा पाउने कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीबाट तक्मा भत्ता पाउने चलन थियो । राजा–रानीको जन्मोत्सव, संविधान दिवस, ७ फागुन र विशेष अवसरमा दिइने तक्मा, पदक, विभूषण वितरणमा आफन्तहरूलाई प्राथमिकता दिने काम त्यसबेला झन् धेरै हुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि पदक नपाउनेले पदक पाउनेको आलोचना गर्थे । तर, आलोचनाको स्वर कमजोर हुन्थ्यो । अहिले आलोचनाको स्वर चर्को छ ।
पदकबारे धनगढीका पत्रकार दिलबहादुर छत्यालले संविधान दिवसका दिन सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकमा मज्जाको टिप्पणी लेखेका छन्ः साँच्चिकै महत्वपूर्ण योगदान गरेका समाजका हिरोहरूले पनि पदक पाएका छन्, तिनीहरूलाई हार्दिक बधाई छ । तर, कालोसूचीमा परेका, तस्करी गरेका, सरकारी जमिन हडपेका लगायत ‘बेग्लै खुबी र पहिचान’ भएकाहरूले पनि पदक पाउँदा इमानदारको अवमूल्यन मात्र भएको होइन, पदक पाउने महान् व्यक्तित्वको मान–मर्दन हुने अवस्था भएको छ । छत्यालको यो कथन अहिलेका विवेकीहरूका लागि चेतावनी हो । छत्यालको यो सानो टिप्पणीले पदक र विभूषणको मामिलामा चेतनशील वर्गबीच फैलिएको असन्तोषको झलक देखाउँछ । ‘बेग्लै खुबी र पहिचान भएका व्यक्ति’ पदक र विभूषणको हकदार हुँदैनन् भन्नेमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ पदक वितरकहरूले ।
देशको शासन व्यवस्थामा दिन–प्रतिदिन अनुशासन र इमानदारी चुक्दै गएको छ । हरेक कुरालाई हलुका ढंगले आँक्ने र जे त होला भन्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई सखाप पार्दै छ । राजनीतिक नेतृत्व नै अनुशासनहीन भएर परस्परमा गाली गर्ने संस्कार विकसित भइरहेको स्पष्ट देखिएको छ । यो छाडातन्त्रले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । देशमा समस्याको चाङ छ, नेताहरू आपसमा बाझाबाझ गर्दैछन् । यो त मगन्ते चरित्र हो । यसबाट बाहिर आएर सबैले आफ्नो होस नसम्हाल्ने हो भने देशको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । यसमा शंका नगरे हुन्छ ।
September 25, 2021 7:48 am | मिडियाबाट साभार,मुख्य समाचार,विचार/ब्लग